Ukuhlanganiswa kweLanga leLanga leLanga eliManyeneyo China Manufacturer
Inkcazo:Ukuhlanganiswa,Ukukhanya kwe-LED,Ilanga leLatrat Street
Ukuhlanganiswa,Ukukhanya kwe-LED,Ilanga leLatrat Street
Home > Imveliso > Ukukhanya kwelanga > Ukukhanya kweSitet Street > Ukuhlanganiswa kweLanga leLanga leLanga eliManyeneyo
Idibanisa yesibane esitrato esisebenza ngeendlela ezininzi, i-high power, ikhanyisa ukufikelela kwiiyure ezingama-15. 6V i-polycrystalline i-panic panels panels, 10W, gcina ngaphezu kweeyure ezingama-5 zokukhanya, qinisekisa ukukhanya kwexesha eliqhelekileyo ebusuku. Umthombo ophezulu wokukhanya kwe-LED, ukukhanya okuhlala njalo. Isibane saseSitratini
Ipaneli yelanga yeklasi, i-classic polycrystalline ishidi le-silicon enezinga eliphezulu lokumisa ukukhanya, isivinini sokutshaja ngokukhawuleza nokutshaja ngokukhawuleza kwiiyure ezingama-5. Gcina ixesha lokukhanya ngaphezu kweeyure ezingama-5 ukuqinisekisa ukukhanya kokuqhelekileyo ebusuku. I-14400mAh lithium ion ibhetri pack, ene-high energy intensity, ubomi benkonzo ende kunye nokunyamezela okukhulu, kunye nobomi benkonzo engama-6-8. Umgangatho ophezulu we-LED umthombo wokukhanya we-Chip, ukungafani okukhanyayo, ukukhanya okungapheliyo.
Ukulungele indlela, ikhaya, iyadi, ikorri nezinye iindawo zokugcina indawo. Ngaba isibane esilungileyo sesitrato selanga, ukukhanya kwe-LED ukukhanya
Ukuhlanganiswa kwesibane. Emva kobumnyama, izibane ziya kuguqulwa ngokuzenzekelayo, kwaye izibane ziya kugqitywa ngokuzenzekelayo nge-daybreak. Iyakwazi ukuguqulwa ngokulawulwa kwimiyalelo. Kukho ikona yekhompyutheni kwisibini sesibane. Isibane siyakucinywa emva komshini omfutshane.
Isistim sokuhlawula i-Solar Fan Solar
Iplastiki yangaphandle yexakeka kwi-LED ye-USB yeLan
Ilanga leLatrat Street
Ukukhanya kwelanga okusisigxina
Ukukhanya kabini kwe-LED